Ungaqinisekisa kanjani ukuthi iSayithi Lakho Livinjelwe i-imeyili | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 19, i-2008 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 12, i-2014 Douglas Karr
Besihlola elinye lamasayithi amaklayenti ethu namuhla. Bazothuthela ekuhlanganisweni kwethu kwe-imeyili kungekudala - okuyinto enhle. Ngicabanga ukuthi amawebhusayithi abo cishe asevele evinjelwe ... nakhu ukuthi kungani…
Banefomu lokuxhumana kuwebhusayithi yabo. Kuhle ngokwanele, inqwaba yezinkambu zokuthumela yonke imininingwane yakho yomuntu siqu ukuze babhalisele isinyathelo sabo se-imeyili. Ukubukisisa, noma kunjalo, futhi empeleni kumane kuyithuluzi abalibekele abogaxekile ukuze balisebenzise.
<INPUT type=hidden value="noma ngubani@someone.com"name =" sendto "/>
Qaphela izinkambu ezifihliwe lapho ungafaka khona ikheli le-imeyili! Njengokuhlolwa, ngidonse ifomu, ngafaka ikheli lami le-imeyili, ngabeka isixhumanisi kwenye inkambu efihliwe. Ngichofoze ukuhambisa neminithi kamuva, ngine-imeyili ye-SPAM ebhokisini lami lokungenayo!
Yile ndlela abogaxekile abangaqhubeka ngayo nokuthumela i-imeyili ngaphandle kokukhathazeka ngokuvinjelwa. Konke okudingeka bakwenze ukuthola ifomu elifana nalokhu iwebhusayithi yakho futhi bangabhala inqubo ecindezela izigidi zama-imeyili ubusuku bonke. Ngubani ovinjwayo? Hhayi ugaxekile… inkampani iyakwenza!
Leli fomu elithile likuwebhusayithi ye Izigidigidi ibhizinisi ledola, hhayi ibhizinisi elincane. Futhi kunezinkulungwane zalezi zinhlobo zamafomu okungavikeleki kuyo yonke indawo enetheni. Okuxakayo lapha ukuthi bakwenze ekhasini le-ASP - ikhasi ebelingenza kalula ukubheka amakheli e-imeyili kuseva bese liwafaka.
Uma kwenzeka uzibuza, impela sibatshelile!
Tags: uhlu lokuvimbela i-imeyiliIfomu le-imeyiliukuba sengozini kwefomu le-imeyiliifomu logaxekile
Ikuphi inkinobho elandelayo?
Feb 19, 2008 ngo-11: 19 AM
Ngokwami, nginokungabaza kunoma ngubani ongenalo ikheli le-imeyili elibhalwe kubhulogi lakhe nefomu lokuxhumana kuphela, kepha kubonakala sengathi ukuphela kwendlela eyi-100% yokukwenza. Ngiyawathanda namakheli e-imeyili ezithombe abantu abawabona kodwa okumele bawathayiphe. Mhlawumbe i-Flash eshumekiwe ingaba ngomunye umzila. Ingabe ungumuntu wefomu lokuxhumana kuphela?
Feb 19, 2008 ngo-11: 35 AM
Ungangabazi - sizama nje ukuzivikela. Inhloso yokuxhumana kwe-IS ukuze abantu bakwazi ukuxhumana nathi ngaphandle kokusishiya sivulekele ama-spambots.
Feb 19, 2008 ngo-12: 49 PM
@Stephen Uqinisile ukuthi iningi lohlelo ababhala ama-spam bots bayavilapha. Ngisho, ungavele uhlolisise imiphumela ye- http://tinyurl.com/yuje9z futhi uthole amakhulu ezinkulungwane zamakheli ku-spam.
Isivikelo esihle kunazo zonke ukuyeka ukushicilela amakheli e-imeyili, bese usebenzisa i- ifomu lewebhu Esikhundleni.
Feb 21, 2008 ngo-3: 26 PM
Ngiyakuqonda lokhu enikusho nobabili. Kimi, ifomu lokuxhumana lizwa lifana nenombolo engu-1-800 esikhundleni senombolo yeselula ekhadini lebhizinisi. Izwa ngendlela enkulu kakhulu ithikithi lezinkampani / lokusekela.
Kusamele ngibone ogaxekile bevela ku-imeyili yomkami engiyenza obfuscation kuyo http://www.rachelsteely.com, kepha lawo masayithi abe nenyanga kuphela. Angisoze ngatshela umngani ukuthi abeke ikheli lakhe le-imeyili endle uma bengazi ukuthi benzani. Ngangingahle ngiyeke kudala, futhi uma bengingenayo i-Google njengesoftware yami yokulwa nogaxekile.
Feb 21, 2008 ngo-3: 31 PM
Ngikholwa ukuthi ama-PDF angumbhalo ocacile (okungenani i-Google ingawasebenzisa izicabucabu) futhi i-imeyili yakho iku-resume yakho, uDoug.
Ngo-Apr 12, i-2008 ku-3: 29 AM
Ngithole iposi lakho le-blog liheha kakhulu, kepha angiqondi kahle ukuthi lokhu kusebenza kanjani.
Uma ugcwalisa leli fomu, ama-spam bots alithola kanjani ikheli lakho le-imeyili?
Uma isayithi linezinkambu ezifihliwe ngekheli lakho le-imeyili ngaso sonke isikhathi, kusobala ukuthi ama-spam bots azithola kanjani.
Kepha uma uyigcwalisa, awugcini nje ngokuhambisa, bese izinkambu ezifihliwe zihambe, akunjalo? Ngabe i-spam bot inohlelo olusethwe kulelo khasi oluthwebula okuthayiphayo noma okufakwa isayithi emikhakheni efihliwe ngenkathi uyisebenzisa?
Angiqondi. Ngicela ungichaze kabanzi?
Futhi yini engenziwa? Usebenzisa kanjani ifomu i-spam bots engakwazi ukukwenza nalokhu? Ingabe kuyindaba nje yokungasebenzisi izinkambu ezifihliwe zamakheli e-imeyili noma kungaphezu kwalokho?
Ngo-Apr 12, i-2008 ku-10: 49 AM
Njengesivakashi, awukho engcupheni. Inkinga ingeyabantu abafaka leli fomu. I-Spammer iyakwazi 'ukufaka i-highjack' ifomu bese ithumela ogaxekile iyisebenzisa. Kungumkhuba omubi owethulwe yinkampani kuwebhusayithi yabo.
Ngo-Apr 12, i-2008 ku-3: 32 AM
Umbuzo owodwa futhi… .uma kufanele ngibeke ikheli lami le-imeyili ekhasini, khona-ke iyiphi indlela engcono yokukwenza? Kuphephile ukusebenzisa amakhodi wezinhlamvu ze-hexidecimal?
Ngo-Apr 12, i-2008 ku-10: 50 AM
Abakwa-Spammers banezindlela zokukhasa eziyinkimbinkimbi kakhulu ezikwazi ukuvuna amakheli e-imeyili ngezindlela eziningi. Ngingakhathala ngobuqotho uma ngike ngibeke ikheli lami le-imeyili ekhasini lewebhu futhi esikhundleni salokho ngisebenzise ifomu lokuxhumana.